Hosia 1 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
1 Okwu Jehova+ wee ruo Hosia+ nwa Beiraị ntị n’ụbọchị+ Ọzaya,+ Jotam,+ Ehaz+ na Hezekaya,+ bụ́ ndị eze Juda, nakwa n’ụbọchị Jeroboam+ nwa Joash,+ bụ́ eze Izrel. 2 Jehova malitere ikwu okwu site n’ọnụ Hosia, Jehova wee sị Hosia: “Gaa+ lụrụ nwaanyị nke ga-akwa iko, mụọkwa ụmụ a kwatara n’iko, n’ihi na ọ bụ ịkwa iko mere ala a ji kwụsị iso Jehova.”+ 3 O wee gaa lụrụ Goma bụ́ ada Dibleyim, nwaanyị ahụ wee tụrụ ime, ka oge na-aga, ọ mụtaara ya nwa nwoke.+ 4 Jehova wee sị ya: “Gụọ ya Jezril,+ n’ihi na n’oge na-adịghị anya, m ga-eme ka ụlọ Jihu+ zaa ajụjụ maka ọbara dum Jezril wụfuru, m ga-emekwa ka ọchịchị ụlọ Izrel kwụsị.+ 5 Ọ ga-erukwa n’ụbọchị ahụ na m ga-agbaji ụta+ Izrel na ndagwurugwu Jezril.” 6 O wee tụrụ ime nke ugboro abụọ mụọ nwa nwaanyị. Chineke wee sị ya: “Gụọ ya Lo-ruhema,+ n’ihi na agaghị m emere ụlọ Izrel ebere ọzọ,+ n’ihi na m ga-achụpụ ha.+ 7 Ma m ga-emere ụlọ Juda ebere,+ mụ onwe m, bụ́ Jehova Chineke ha, ga-azọpụta ha;+ ma ọ bụghị ụta ma ọ bụ mma agha ma ọ bụ agha ma ọ bụ ịnyịnya ma ọ bụ ndị na-agba ịnyịnya ka m ga-eji zọpụta ha.”+ 8 O wee kwụsị Lo-ruhema ara, o wee tụrụ ime mụọ nwa nwoke. 9 Chineke wee sị: “Gụọ ya Lo-amaị, n’ihi na unu abụghị ndị m, agaghịkwa m abụ Chineke unu. 10 “Ụmụ Izrel ga-adị ka ájá dị n’oké osimiri, bụ́ nke a na-apụghị ịtụ atụ̀ ma ọ bụ ịgụta ọnụ.+ Ọ ga-erukwa na n’ebe a na-asịbu ha, ‘Unu abụghị ndị m,’+ a ga-asị ha, ‘Unu bụ ụmụ nke Chineke dị ndụ.’+ 11 A ga-achịkọta ụmụ Juda na ụmụ Izrel ka ha dịrị n’otu,+ ha ga-eme otu onye onyeisi ha wee si n’ala ahụ pụọ,+ n’ihi na ụbọchị Jezril ga-abụ ụbọchị ukwu.+